एमबीबीएस उत्तीर्ण गरेका ७६ प्रतिशत परीक्षार्थी लाइसेन्स परीक्षामा फेल – Nepali Health
एमबीबीएस उत्तीर्ण गरेका ७६ प्रतिशत परीक्षार्थी लाइसेन्स परीक्षामा फेल
२०७५ साउन २७ गते ९:४३ मा प्रकाशित
काठमाडौँ, २७ साउन । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले शनिबार लिएको लिएको चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षामा एमबीबीएस उत्तीर्ण गरेका ७६ प्रतिशत विद्यार्थी फेल भएका छन् । सो परीक्षामा वीडीएस तर्फ भने ५७ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् ।
एमबीबीएस उत्तीर्ण गरी लाइसेन्स परीक्षामा यत्तिधेरै फेल भएको सम्भवत यो नै पहिलो हो । काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा दिलिप शर्माले शनिबारको परीक्षामा एमबीबीएसतर्फ ७७६ जनाले परीक्षा दिएकोमा १८९ जना मात्रै पास ( २४.३५प्रतिशत) मात्रै पास भएको बताए ।
उनले १२७ जनाले परीक्षा दिएको बीडीएस तर्फको लाइसेन्स परीक्षामा ७३ जना पास (५७.४८ प्रतिशत) भएको जानकारी दिए ।
‘दुबै समूह तर्फको गर्दा समग्रमा पास प्रतिशत २९ रहेको छ । तर एमबीबीएसमा पास हुने प्रतिशत निकै कम हो,’ डा शर्माले भने ।
उनका अनुसार यो परीक्षामा धेरै जसो पटके परीक्षार्थी ( पटक पटक फेल भएर सहभागी हुँदै आएका ) सहभागी थिए । ‘करीब ५ सय जति त पुराना परीक्षार्थी थिए होलान त्यसैले पनि यसपटक धेरै फेल भएको हो कि ?’ उनले अनुमान गरे ।
चिकित्सा अध्ययन उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र लिएर आएका विद्यार्थीहरु लाइसेन्स लिने बेलामा यति धेरै फेल हुनुले मेडिकल शिक्षाको गुणस्तरमा थप शंका उब्जाएको छ ।
थप नौ जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै
स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव लामिछाने विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा
विदेश गएर उपचार गर्ने विपन्नलाई सरकारले सहयोग नगर्ने
स्थानीय निकायले एम्बुलेन्स खरीद गर्दा सतप्रतिशत कर छुट
सप्तरीमा साताव्यापी बृहत नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर शुभारम्भ
राजिनामा स्वीकृत भईसकेका डाक्टर पनि समायोजनमा ?
भरतपुर क्यान्सर अस्पताललाई एमसिएच, डिएम अध्ययन् केन्द्र बनाउन मन्त्रालय सकारात्मक
प्रतिष्ठानको घटना छानविन गर्न कर्णाली सरकारले बनायो कार्यदल
अनशन तोडेपछि डा. केसीले भने, ‘बाँदरले आफ्नो घर पनि बनाउँदैन अरुले बनाएको भत्काउँछ’
पूर्व प्रधानन्यायधीश कार्कीको हातबाट जुस पिउदैँ डा. केसीले अनशन तोडे
मलदान: के मान्छेको दिसाले रोग निको पार्न सक्छ?
सरकार विरुद्धको प्रदर्शनमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राडा वाग्लेको सहभागिता